Ny zava-drehetra momba ny Oxytocin Acetate
1. Inona ny Oxytocine Acetate?
2. Oxytocine Acetate
3. Tena mahasoa amin'ny vehivavy ve ny oxytocine?
4. Oxytocine acetate
5. Oxytocine side effects
6. Oxytocine ve ianao?
7. Fanafody hafa mety hisy fiantraikany amin'ny Oxytocin Acetate
8. Oxytocin Acetate fomba fitantanana sy dosage
10. Aiza no ahazoako mahazo Oxytocine acetate?
Ho an'ny hormone izay mitana andraikitra manan-danja amin'ny fitondrana vohoka, ny fahaterahana, ary ny fifamatorana ara-pihetseham-po, ny Oxytocin Acetate no tena zava-dehibe. Ity lahatsoratra ity dia hanome lanjany ny tombontsoa azo avy amin'ny Oxytocin, ny vokatra hafa, ary ny toerana ahafahanao mividy izany.
Miaraka amin'ny mpahay siansa manao ezaka bebe kokoa mba hianatra momba ny vatan'olombelona, ​​dia mihamazava hatrany fa misy hormones toy ny oxytocine acetate izay manohina ny fihetseham-po amin'ny hafa. Ny fitiavana dia fantatra fa tena manan-danja lehibe izay misy fiantraikany amin'ny fitondran-tenan'ny olona iray na iray. Tsara homarihina fa avy amin'ny hormone tokana, izay voajanahary izay misy fiantraikany amin'ny fihetseham-po rehetra sy ny fikorontanana, izany rehetra izany.
Fantatra amin'ny hoe hodi-biby mahavelona na hormonina fitiavana, Oxytocine dia sokajiana ho iray amin'ireo zava-mahadomelina matanjaka indrindra izay mampitombo ny fihetseham-po. Oxytocine dia zava-mahadomelina sy hormone izay novolavolain'ny hypothalamus ary nanasitrana ny rà mandriaka ao amin'ny rà. Ny tsiambaratelo dia misy fiantraikany amin'ny asan'ny elektrika hita ao amin'ny hypothalamus. Ohatra, rehefa mientanentana ny sela ao amin'ny hypothalamus, dia mamokatra Oxytocine ary mifamadika amin'izany.
(1) Oxytocine sy ny fihetseham-po
Ny mpikaroka dia nanamarina fa ilaina ny acetate oxytocine mandritra ny fotoana mahafinaritra. Na dia ara-boajanahary aza, ity hormonina ity dia hita amin'ny ankapobeny mandritra ny fotoana fohy toy ny fametahana akofady amin'ny vady fanahy iray, ny fifandraisana voalohany eo amin'ny olona roa amin'ny samy lahy na lahy samy lahy na samy vavy izay mifankatia. Ny Oxytocine dia mamorona fahatsapana fahafinaretana ary noho izany dia miteraka fahatsapana mamerina ny fihetsik'ireo fahafinaretana. Ilaina koa ny fanovana ny famantarana ny atidoha izay mifehy ny fanehoana ireo teny tsy mivaingana toy ny endriky ny tarehy. Ity dingana ity, angamba, dia mitranga amin'ny alalan'ny fanovàna ny famantarana ny amygdala izay mandrindra ny fientanam-po ara-pihetseham-po.
(2) Oxytocine sy ny asa
Oxytocine dia manampy amin'ny fomba fiasa amin'ny fifandraisana amin'ny anton-javatra hafa. Manana anjara andraikitra amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana asa amin'ny olona izy io. Mandritra ny fandroahana ilay zazakely dia mihamitombo ny haavon'ny oxytocine. Ankoatra izany, misy fiantraikany be eo amin'ny oxytocin levels ho tompon'andraikitra amin'ny fiovan'ny pulsatile sy fifanekena amin'ny vehivavy. Ny oxytocine izay mamokatra eo an-toerana ao amin'ny placenta dia tompon'andraikitra amin'ny rafitry ny asa. Ireo mpitsidika izay miasa oxytocine koa dia mifehy amin'ny asa.
Ankoatr'izay, ny fahatsapana ireo mpandray ireny dia mihamitombo amin'ny asa mialoha na amin'ny fe-potoana. Mba hisorohana ny vokatra azo avy amin'ny hozatry ny tranon-jaza ao, dia misy ny fiterahana eo amin'ny sela uterine. Ireo fitambaran-tavoahangy ireo dia novolavolain'ny protexine connexin. Oxytocine dia mampitombo ny isan'ireo proteinina ireo, ka mamaritra ny isan'ireo baraingo (34 / 35).
Mandritra ny fanombohana ny asa, dia mihena ny halavan'ny progesterone ary ny oxytocine acetate dia mampitombo ny fiterahana. Ny vokatra miteraka dia miteraka fanaintainana bebe kokoa mandritra ny asa ary noho izany dia manentana ny vatana hanafahana oxytocine bebe kokoa, izay mahatonga bebe kokoa ny fanaintainana sy ny fanaintainana, ary ny dingana masiaka dia hiteraka ny fahaterahan'ny zaza iray.
(3) Oxytocine sy ronono alefa
Aorian'ny fiterahana, ny zavatra voajanahary manaraka hitrandrahana dia ny fampinonoana, fihetsika izay tsy hitranga amin'ny tsy fisian'ny oxytocine. Ny fihetsik'ilay zaza dia mampihetsi-po ny tendron'ireo reny eo amin'ny toerana misy azy. Raha vantany vao miseho io fahatsapana io dia alefa any amin'ny hypothalamus amin'ny atidoha ny mari-pamantarana mba hamotsorana ny oxytocine. Ity fihetsika ity dia miteraka fiakaran'ny oxytocine ao amin'ny tontolo mifanaraka amin'izany. Ny oxytocine dia mandeha mivezivezy ary mahatonga ny hozatry ny alveoli ao amin'ny nono mba hamotsaka ny ronono amin'ny dingana antsoina hoe "Milk let-down."
Ny iray amin'ireo fanontaniana mahazatra izay anontanian'ny olona dia ny Oxytocine supplement dia mahasoa ny vehivavy ihany. Raha fintinina, ny valiny dia tsia. Ny fanazavana nomena dia hanampy anao hahatakatra ny antony amarantsika ny tsimok'aretin'ny Oxytocin Acetate ho an'ireo lahy sy vavy.
(1) Oxytocine amin'ny vehivavy
Tena zava-dehibe amin'ny vehivavy ny hormonina satria mandray anjara mavitrika amin'ny fitsaboana sy ny fizotry ny fiterahana izy io. Mandritra ny asa dia miteraka ny fitondran-tenan'ny renirano ary manampy amin'ny fitombenana ny tranon-jaza taorian'ny nanafahana azy. Rehefa mitaiza ny zazakely dia alefa ny famotsorana an'i Oxytocin, izay mitondra any amin'ny vatana izay mamela ny ronono ho an'ny zazakely. Ankoatra izany, Oxytocin dia manana andraikitra manan-danja amin'ny fanamafisana ny fatoran'ny reny.
(2) Oxytocine amin'ny lehilahy
Tahaka ny vehivavy, Oxytocin dia mampiroborobo ny fifandraisana amin'ny lehilahy. Tamin'ny fikarohana natao tamin'ireo ray izay nanana dimy volana ny zazakely, dia nitombo ny fampiroboroboana ny fihetsiketsehana nataon'ny ray sy ny zaza taorian'ny fitazonana Oxytocine tamin'ny alalan'ny ranon-tsavony. Ireo izay tsy nahazo ny Oxytocin zap dia toa tsy nifanaraka akaiky tamin'ireo zanany raha oharina tamin'ireo nampiasa azy.
Tao amin'ny fanadihadiana iray hafa, ny oxytocine dia hita fa mpikiravira fandeferana satria nahatonga ireo olona nifaneraserana teo amin'ny fifandraisana dia nijoro lavitra ny vehivavy tsara tarehy raha oharina amin'ireo izay tsy tao Oxytocin. Tsy nisy fahasamihafana hita teo amin'ny lehilahy tokana, ary nihevitra fa noho izy ireo tsy nifanerasera tamin'ny vehivavy.
Ny Oxytocine Acetate dia mitarika ho amin'ny fiaraha-monina manoloana ny olona izay mety hihevitra fa tsy anisan'ny tarika misy azy izy ireo. Izany dia notsongaina rehefa nizara ny zava-mahadomelina ny mpianatra Holandey ary toa tsara kokoa tamin'ireo olo-malaza Holandey raha oharina amin'ny endrika hafa amin'ny anarana alemana na arabo; Nofaranana àry fa ny oxytocine dia misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana ara-sosialy amin'ny fanamafisana izany rehefa mahatsapa ny iray ho toy ny ampahany amin'izy ireo.
Fampijaliana manohitra izany
Oxytocine dia mety ho iray amin'ireo zava-mahadomelina mahomby manohitra ny fanafody. Miasa amin'ny fihenan'ny cytokines voafaritra izy, izay manampy amin'ny fanasitranana amin'ny ratra raha misy olona mijaly.
Oxytocine dia mampiorina fifandraisana
Ny oxytocine Acetate nivoatra dia fantatra fa misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisanao amin'ny havan-tianao sy ny fahatsapana tsapanao rehefa manodidina azy ireo. Indray mandeha misy fifandraisana manjavozavo, dia azo inoana fa hojerenao sy hikorontan-tsaina ianao. Ny vaovao tsara dia ny iray amin'ireo Oxytocine acetate dia miteraka fifandraisana bebe kokoa.
Mampiroborobo ny fifandraisana izy io
Mahaliana ny fivoaran'ny Oxytocin Acetate. Ny fandinihana natao tamin'ny vehivavy bevohoka dia nampiseho fa ny oxytocine avo lenta mandritra ny telo volana voalohan'ny fitondrana vohoka dia nibahana tsara raha vao teraka ny zazakely. Ireo izay nanana toerana ambony nandritra ny fitondrana vohoka ary nandritra ny volana voalohany taorian'ny nanaterana dia nitarika bebe kokoa tamin'ny fitondrantena toy ny mihira sy ny fandroana ny zaza amin'ny fomba izay mampiseho fitiavana sy fifamatorana bebe kokoa.
Ny asa toy ny fanamafisana ny fahatsiarovana ara-pihetseham-po
Ireo fahatsiarovana mahafinaritra izay efa nizara tamin'ny reninao na ny namanao tsara indrindra dia tsy tokony hadino na oviana na oviana. Izany no mahatonga anao hahatsapa fifaliana. Ny fampiasana Oxytocine dia mety hampitombo ny fahatsiarovan-dry zareo fa mizara amin'ny olona hafa.
Ny fandinihana natao tamin'ny lehilahy dia nampiseho fa nampiasa Oxytocine izy ireo mba hahatsiaro ireo fahatsiarovan-tena niarahan'izy ireo tamin'ny reniny. Eo amin'ny tsy mitongilana dia mety hitarika ny fahatsiarovan-dratsiny toy ny hoe tezitra amin'ny maha-zaza azy izany. Noho izany, ny haavon-drivotra dia mety hiakatra ary na dia ny filàna hamaly aza.
Manampy ny reniny ho reny
Araka ny voalaza tetsy aloha, Oxytocine dia manampy amin'ny fisorohana ny placenta ary koa amin'ny fitazonana ny tranon-jatovo mifanaraka amin'izany ka mampihena ny fandosirana. Ankoatra izany, dia mamela ny fandroahana ronono avy ao amin'ny lakandrano izany, ary manamaivana ny fampinonoana.
Ankoatr'izay, rehefa teraka i Oxytocine, dia manampy amin'ny fampivoarana ny fifandraisana eo amin'ny zaza sy ny reny amin'ny fihetsika malefaka ary na dia amin'ny alalan'ny fijery fotsiny aza, fa tsy manadino fa ny mpifankatia amin'ny Oxytocin dia mankafy ny orinasa ny zanany bebe kokoa ary tsy dia atahorana loatra ny fankahalana.
Mitombo ny fahalalahan-tanana
Manolotra zavatra izay midika ho zava-dehibe ho anao ho an'ny hafa ve ianao toy ny mamoaka ra avy amin'ny vato? Eny, raha te hanan-javatra be loatra ianao ary hamadika anao ho mpanome, dia tokony ho fantatrao fa izany no ataon'i Oxytocine.
Mety hisy fiantraikany ratsy eo aminao izany na tsia, fa ny zavatra dia ny hampitombo ny fiaraha-miory amin'ny hafa ny Oxytocin ka mahatonga anao hanome na hizara zavatra, indraindray amin'ny vidiny manokana.
Oxytocine Acetate ho fanampiny
Indraindray ny haavon'ny Oxytocine ao amin'ny vatana dia mety ho ambany, ary hisy ny fiantraikany. Ho an'ny reny mitaiza zaza, mety midika izany fa hisy ny fisorohana ny reflexa ho an'ny ronono, izay tsy dia kely loatra na tsy mampinono.
Ny haavon'ny Oxytocine ambany dia fantatra amin'ny fitarihana ny otisma sy ny areti-maso misy otisialy toy ny Asperger syndrome. Ireo fepetra ireo dia miavaka amin'ny asa sosialy mahantra. Amin'ny fampitomboana ny Oxytocine ao amin'ny vatana dia afaka mahazo fandresena amin'ny fitsaboana ireo fepetra ireo ianao. Ankoatra izany, ny fanomezana ny Oxytocine voajanahary voajanahary dia afaka mitana andraikitra manan-danja amin'ny fitsaboana aretina mampihorohoro.
Amin'ny maha-mpampihorohoro ara-piraisana azy
Na dia lazaina ho ampahany manan-danja amin'ny fifandraisana rehetra aza ny firaisana, dia mbola mety ho fanamby ho an'ny sasany izany. Ny tsy fisian'ny toetry ny kalitao tsara dia mety hitarika fifandraisana ratsy, ary tsy mahagaga raha ny mpivady rehetra dia tokony hijery zavatra iray afo ny libido.
Soa ihany, Oxytocin dia manampy amin'ny fanatsarana ny libido tsy miovaova ka mamela anao hanana firaisana ara-nofo bebe kokoa amin'ny vadinao. Amin'ny lehilahy dia mampitombo ny fahafaha-manao izany ary manome fahafaham-po mahafinaritra iray mandritra ny fientanam-po iray satria io no fotoana anafahana azy. Fantatra ihany koa ny mahatonga ny lehilahy iray ho tia ny vehivavy bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny fiheveran'ny lehilahy.
Tsy hisy fialantsiny intsony raha tsy tokony hanao firaisana amin'ny olon-tianao ianao indray mandeha ao amin'ny Oxytocin Acetate (50-56-6); Ity fitsaboana ity dia hanatsara ny fitondrantenanao amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny alalan'ny fanomezana anao ny fironana ara-panananao nitadiavanao.
Manala ny adin-tsaina izany
Fantatsika rehetra ny ahiahintsika tsy an-kijanona; Hahafoy ny fiadanan-tsainao izy, handratra ny torimaso, hanome anao ny hatezerana, ary ho azo antoka fa manapoizina ny fotoananao. Raha toa ka mitranga aminao izany, dia tokony ho fantatrao fa misy fomba hanamaivanana ny adin-tsaina.
Amin'ny fampidinana fotsiny Oxytocin Acetate, afaka manaloka ny tsindry avy amin'ny fiainanao ianao. Izany dia satria manosika ny fahatsapan'ny fahafaham-po, mampihena ny ahiahy, ary mitazona anao ho tony, indrindra rehefa ao anaty orinasa namana ianao.
Na inona na inona mihinana anao; fanerena ara-bola, fifandirana eo amin'ny fianakaviana, na fangatahana ara-pihetseham-po, dia afaka miteraka fihavanana anaty amin'ny fampiasana Oxytocin supplement.
Raha nijery ny fitaratra ianao na nanamaivana ny tenanao ary nanontany tena hoe inona no tokony hataonao momba ny lanjany be loatra, dia tokony handinika ny Oxytocin ianao. Ny fanovana fomba fiaina hafa dia mety ho toa tsy misy dikany, fa Oxytocine fampiasana dia ny vahaolana tsara indrindra rehefa miteraka lanjany.
Mihetsika izy io fanavakavahana amin'ny alalan'ny neurons Oxytocin ao amin'ny hypothalamus. Raha misy olona tsy ampy ny neurons Oxytocin, dia mety ho voan'ny aretina tsy voafehy izy ireo, izay mitarika ho amin'ny fiterahana.
Inona no mahatonga azy io ho safidy tsara amin'ny fitantanana lanja dia ny mahatonga ny Oxytocin Acetate vitsy ny vokatra ary tonga miaraka amin'ny karazana tombontsoa maro be amin'ny raharaha mavesatra.
Mety hanelingelina anao ny fanaintainanao tsy tapaka. Mety hisy fiantraikany eo amin'ny fiainanao izany ka tsy ho vitanao intsony ny asanao isan'andro. Mety handanjalanja anao izany, indrindra raha tsy manana fitsaboana mety ianao ary tsy mahafantatra ny fomba hanamaivanana ny fanaintainanao na hanamaivana ny fanaintainanao. Ny fampiasana oxytocine dia iray amin'ireo fomba mahomby izay azonao atao mba hampihenana ny migraines sy hahazoana fanampiana.
Ny antsasaky ny marary nampidirina tamin'ny Oxytocin Acetate ho fitsaboana ny migraine dia nitatitra fa nitombo avo roa heny ny fanaintainana ary ny ampahefatry ny hafa dia nilaza fa tsy nipoitra avy amin'ny migraines intsony izy ireo taorian'ny ora efatra nampiasainy.
Ny fiankinan-doha na ny tsy fahampian-tsakafo
Mety ho sarotra ny fiankinan-doha, saingy misy fomba iray ahafahan'ny olona iray hiady amin'ny fiankinan-doha ary handresy ny rongony mikaroka. Ny Oxytocin Acetate dia mahasoa amin'ny fisotroana toaka, opiates, na mpampiasa heroin satria mampihena ny ahiahy. Mety hanampy koa izy io amin'ny fampihenana ny fialana amin'ny fisotroana alika sy ny zavatra mampidi-doza hafa.
Manatsara ny fahaiza-miaina
Ny fandinihana natao tamin'ireo olona manana autism dia mampiseho fa ny fampiharana ny Oxytocin Acetate dia nanatsara ny fomba nifandraisan'izy ireo. Nofaranana àry fa tsy voan'ny Oxytocine ny olona nijaly. Oxytocine, amin'izay, dia manampy amin'ny fiatrehana fahasarotana amin'ny fifandraisana ary koa amin'ny fananganana fifandraisana ara-tsosialy. Ankoatra izany, manampy amin'ny fampihenana ny tahotra amin'ny hafa izy, indrindra fa amin'ny olon-tsotra.
Manjary fiarovan-tena izy io
Ny fampiasana oxytocine dia fantatra amin'ny fampisehoana ny fiarovana ny fiarovana amin'ny olona iray izay mahatonga ny olona iray ho voaro amin'ny olona ao anatin'ny tarika. Ohatra, ny miaramila iray ao Oxytocin dia hiaro ny firenena amin'ny ankapobeny raha misy ady satria mahatsapa fifandraisana amin'ny mpiara-belona aminy izy.
Mamporisika ny torimaso izany
Ny tsy fahitan-tory dia iray amin'ireo trangan-javatra malemy indrindra izay misy fiantraikan'ny olona amin'ny sokajin-taona rehetra, fa tsy manadino ireo zokiolona. Mety tsy dia misy olana loatra izany, fa rehefa tsy ampy torimaso ampy mandritra ny tapa-bolana ianao, dia mety ho reraka sy tsy hiraharaha.
Izay mandany ny alina mandavo sy mitodika amin'ny alina dia tokony hanome azy Oxytocin Acetate. Izany dia satria ny iray amin'ny Oxytocin Acetate dia ny manampy anao hisakafo. Oxytocine dia manondro ny vokatry ny cortisol ka mahatonga ny vokatra mampangitakitaka izay tsy isalasalana fa hanome anao matory. Amin 'ny fampiasana azy, dia tsy hanana olana ianao raha tratranao ny torimasonao rehefa tapitra ny ondana amin'ny alina.
Na dia mahazo tombontsoa maro aza i Oxytocin, dia misy ihany koa loza mety hitranga. Ohatra, mety hampivelatra ny fifandraisana sy ny fananganana fiarahamonina izy; Mety hitarika amin'ny famoronana vondron'olona sy vondrona hafa izay mitarika ho amin'ny fanavakavahana sy ny fitsiriritana.
Amin'ny toe-javatra sasany, dia nampiroborobo ny tsy fahamarinan-toetra izy, indrindra rehefa nahazo tombony ny vondrona izay an'ny mpandainga.
Ny fitsaboana Oxytocine dia mety hiteraka vokatra manaraka;
Fihetseham-po tsy ara-dalàna
Ny fandosirana taorian'ny fiterahana
Tsy tokony haka an'io fanafody io ianao raha fantatrao fa mahazatra anao izany. Mba hahazoana antoka fa azo antoka ianao handray izany, lazao amin'ny dokotera raha mijaly amin'ny iray amin'ireto fepetra manaraka ireto ianao;
Raha tsy bevohoka efa ho telopolo herinandro ianao
Efa nodidiana ny tranonao na ny matihanina ianao (anisan'izany ny C-section aloha
Nanana asa sarotra noho ny kelikely
Manana fiterahana dimy na mihoatra
Ny areti-kozatra fo
Tokony hampahafantaranao ny dokotera raha mampinono ianao.
Ny sasany amin'ireo fanafody azonao dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny Oxytocine ao amin'ny vatanao na mahatonga ny fihetsika tsy mahazatra. Vokatr'izany dia mety tsy maintsy hampiato ny fampiasana azy ireo ianao raha te hampiasa Oxytocine. Anisan'izany;
Ny fanafody izay misy kafeinina toy ny zavatra toy ny fanafody malazan'ny aretin'andoha
Ny fanafody kesika na ny hatsiaka izay misy famongorana, izany hoe, pseudoephedrine na phenylephrine
Ny fanafody mampihetsi-po, ohatra, ireo natao ho fanafody ADHD (aretina miady amin'ny fihenan'ny atidoha), anisan'izany Stratella, Ritalin, Daytrana, Concerta, Adderall, ary ny hafa.
Androany, misy fomba maro izay tianao alefanao ny Oxytocin Acetate. Ireto misy vitsivitsy;
♦ Oxytocine injection
Matetika ny olona no tia Oxytocine injections satria milaza azy ireo ho mahomby kokoa. Ny vehivavy manantena dia mampiasa azy io ho toy ny fomba hanombohana sy hanatsarana ny fifindrana mandritra ny asa. Azo ampiasaina ihany koa ny hampitsaharana ny fitondrana vohoka.
Hatramin'ny nipoiran'ny tsimok'aretina dia misy vokany be dia be, ny olona iray dia tokony hijery fampitandremana fanampiny rehefa mampiasa azy ireo.
♦ Oxytocine pills
Izany no fomba mahazatra indrindra izay tian'ny olona maro ny manana Oxytocine.
♦ Oxytocine nasal sprays
Tsy toy ny setroka Oxytocine sy Oxytocin ny oksizencine nasal spray miasa haingana kokoa satria mihetsiketsika haingana amin'ny rà ao amin'ny atidoha. Ny ankamaroany dia ampiasaina amin'ny marary izay mijaly amin'ny olana ara-tsaina.
Ny tombontsoa azo avy amin'ity ranon-tsakafo ity dia ny fampiasanao azy toy ny vatana hafa. Mila ampiharina fotsiny ianao ao amin'ilay faritra izay tena mahasoa anao, ary mandray ny tombontsoa ianao. Ohatra, ny olona sasany dia te hampiasa azy io manerana ny faritry ny tendany sy ny kavina raha toa kosa ny hafa dia aleony mamafy izany eo amin'ny felany, bodofotsy, kitapo, ary akanjo.
Amin'ny ankapobeny dia mahagaga izany, indrindra amin'ny fanorenana fitokisana sy famoronana fifamatorana bebe kokoa amin'ny hafa.
♦ Oxytocine necklace
Maro amintsika no tia manao firavaka, ary ny vaovao tsara dia ny hoe afaka manana karazany maro avy amin'ny Oxytocin. Amin'izao fotoana izao, maro ireo fivarotana amin'ny aterineto no manolotra oxytocin necklace amin'ny endrika samihafa samihafa. Arakaraky ny azonao atao, dia azonao atao ny mifidy ny halavany sy ny fitaovana tianao hatao, izany hoe platinum, volamena, na volafotsy.
Ny antidote dia entina mitsivalana ao anaty rafitra amin'ny dosia mifehy. Ohatra, raha ny tanjona dia ny hampiato ny asa, ny IV ny fampidirana hatramin'ny 2milliunits isa-minitra dia omena amin'ny telolahy enim-polo.
Ny Antidote Oxytocin dia mahery ary mety hiteraka fahafatesana indray mandeha. Ilaina ihany koa ny fitantanana ny Autisme.
Efa nieritreritra ve ianao fa afaka manana molekiola tattooed anao ianao mba hahafahanao manana zavatra kely fanampiny rehefa mahatsapa fientanam-po ianao? Raha izany no izy, dia tokony hisy ny tatoazy Oxytocin ao amin'ny lisitry ny bokinao. Fomba tonga lafatra ny fampihenana ny fahakiviana, ny alahelo, ary ny tahotra ara-tsosialy, ary ny tena zava-dehibe, ireo mpinamana dia hankasitraka anao noho ny fahalalahan-tanana.
Ny famenoana Oxytocine dia ny fanafody manenina izay matetika ampiasaina hampitombo ny fahafinaretana ara-pananahana sy ny fahalianana. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fitantanana mavesatra ary koa ny fitomboan'ny ronono mandritra ny fametahana.
√ Nanasitrana ny fahaketrako izy
Hoy i George: "Toy ny lehilahy iray izay niady tamin'ny fahaketrahana nandritra ny folo taona dia nilaza aho fa mahagaga io zava-mahadomelina io. Nomem-boninahitra tamiko ny mpiara-miasa roa izay niady ketraka ihany koa. Talohan'ny fampiasako azy dia nampiasa fanafody isan-karazany aho ary nanandrana dokotera maromaro sy mpitsabo ary tsy nisy toa niasa. Niova anefa ny zava-drehetra. Ankafiziko ankehitriny ny vady aman-janako sy ny zanako, tsy toy ny hoe nitia ahy irery. Eny, tsapako fa sitrana tanteraka aho satria tsy mahatsiaro velively ny alaheloko. Ny hery sy fahatokiana ary ny fahasambarako dia miverina; noho ny Oxytocin Acetate. "
√ Safidy tsara indrindra ho an'ny firaisana ara-nofo sy ny fampaherezana
Hoy i Terry: "Te hanatsara ny fifandraisanao ve ianao? Mihomehy ve ny fiainanao? Raha efa nanandrana nanao fialan-tsasatra ianao saingy tsy nahomby satria tsy te-hifankatia intsony amin'ny mpiara-miasa, dia tokony hanandrana izany ianao. Oxytocine dia fividianana tsara izay nanome ny fiainam-pianakaviako ho feno fihodinana feno. Izahay mivady izao dia mahatsapa ny faha-telopolo taona latsaka kely ary mankafy ny fitiavanay ny manao fivoriana. Manoro hevitra azy aho. "
√ Ny fanaintainana tsara indrindra
Hoy i Jonathan: "Efa zatra an'izany aho izao, ary tsy mieritreritra aho fa hanakarama izany amin'ny zavatra rehetra. Hatramin'ny nahitako fa manampy amin'ny alikaola izy io, nanjary lasa fanafody. Tsy mila mijaly intsony aho isan'andro. Oxytocin Acetate no nahazo ahy! "
Heverinao ve fa ilaina ny mampitombo ny haavon'ny Oxytocine? Te hanam-bintana tsara ve ianao ary hanadino ny fanahianao sy ny alahelonao? Nahita olona manokana ve ianao ary mahatsapa fa te-handany fotoana miaraka amin'izy ireo ianao? Saingy indraindray tsapanao fa toy ny fifamatorana dia tsy toy ny matanjaka.
Araka ny hita ao amin'ny lahatsoratra, Oxytocin Acetate no fitaovam-piadiana lehibe azonao ampiasaina mba hahazoana antoka fa manomboka mahatsiaro tsara ianao amin'ny fananana sakafo mahazatra, sarimihetsika ary daty firaisana ara-nofo rehefa mandany fotoana miavaka ianao. Saingy tsy te-hiditra ao amin'ny fivarotana iray ianao ary hangataka ny fanampiana Oxytocin raha tsy mandinika antony sasany toy ny vidin'ny vidiny sy ny kalitaony. Ka aiza ianao no mahazo ny Oxytocin Acetate (50-56-6)?
Miaraka amin'ny orinasam-pampandrosoana isan-karazany isan'andro, dia misy ny mety ho an'ny mpivarotra sasany tsy mamoaka izay nandidianao azy. Ny mahagaga dia ny mety hikorontana anao amin'ny fividianana Oxytocin Acetate izay tsy hahatanteraka ny fahombiazany sy ny fiarovana azy. Ny hany fomba hisorohana anao tsy hividy entana iray izay azo entina amin'ny fangorahana dia ny mahazo Oxytocin acetate mpamatsy azonao itokisana.
Azo antoka isika Oxytocin Acetate mpamorona izay hanome anao ny kalitaon'ny Oxytocin Acetate ary koa ho an'ny fampiasanao manokana. Ny vidin'ny Oxytocin dia sariaka, ary azonao atao ny mametraka anay amin'ny fangatahana rehetra mety ho azonao.
Mazava fa ny Oxytocine no mahatonga antsika olombelona. Tsy hanana fihetseham-po isika raha tsy izany, ary izany no mahatonga antsika hoe iza isika. Ny fahaizana mifandray, mikarakara ary mampiely fitiavana amin'ny hafa dia tsy hisy.
Ny oxytocine dia hita fa zava-mahadomelina mahomby, tsy ho an'ireo izay mijaly amin'ny fahaketrahana fa ho an'izay te hanatsara ny fiaraha-monina. Ny mpitantana ny orinasa, ny mpiasa ary ny mpivarotra izay hita tao Oxytocin dia nitatitra fa nilaozan'ny fifanarahana maro kokoa noho ny teo aloha.
Tsikaritrareo ihany koa fa ny Oxytocin Acetate dia ampiasaina mba hanarahana ny fepetra samihafa izay misy fiantraikany amin'ny fahasambarantsika. Inona àry no azonao andrasana? Mandidy azy io ary mankafy ny maha-olona manontolo.